Kulesi sihloko sizozama ukuqonda ukuthi kungani Elena Temnikova ushiye iqembu "Isiliva". Ukuze uzwisise konke kulungile, ujike izitatimende avela kuye lo oculayo, okuyinto ayenza izingxoxo zakhe.
Ukuze siphendule lo mbuzo, kungani Temnikova ushiye iqembu "Isiliva", kufanele uqonde ukuthi ungaqala kanjani uqhekeko eqenjini. Vocalist iye yaqinisekisa ulwazi axoshwe eqenjini. Ngokushesha ngemva kwalokho, search kwaqalwa actress ukulishintsha. Kulokhu, it waphoqeleka ukuba kugcwaliseke zonke amakhonsathi ngaphambilini ehleliwe. Izizathu ukuxoshwa kwakhe umculi yena akazi. Lisuke bazotshelwa ngalolu shintsho. Ayikho incazelo unikezwa kulesi senzakalo. Inguqulo ukuthi Maxim fadeev wadubula umhlanganyeli ngenxa zokuthumela Artem, umzalwane wakhe, into eqanjiwe uqobo vocalist. Ngakho uzama ukuchaza kwasekuqaleni ngokwayo ukuziphatha abakhiqizi.
Ukuze uqonde ukuthi kungani Yelena Temnikova ushiye iqembu "Isiliva", kufanele wazi mayelana izici ilungu inkontileka. Ikakhulukazi, kubalulekile ukuze sithole ukuthi kukhona umshwana kudokhumenti ezizenqabelayo amantombazane ukushada. Lo mngcele ine izivumelwano soloists bands eziningi zanamuhla. Nokho, umculi ukuthi iqembu "Isiliva" kuleli cala iyathinteka. Ngamunye abahlanganyeli kwaba nokuba nobuhlobo abakhethiweyo. Kubandakanya kakhulu le Elena, esesikhundleni isikhathi eside eseyinsizwa. Abahlanganyeli avunyelwe ukuba babe nezingane futhi ukushada. Nokho, uma Maxim fadeev wathi umuntu kufanele ungalokothi uhlanganise uthando kanye nomsebenzi. Ngokusho Heroine zethu, kungukuphula umsebenzi wawusavinjelwe isizathu sokuxoshwa kwakhe. Artem - isisebenzi isikhungo ukukhiqiza, ebhala umculo futhi wenza amalungiselelo kubaculi. Yilokho Heroine wethu sangena ebuhlotsheni naye. Kungenzeka ukuthi ibikwe Maksimu Aleksandrovichu. I soloist kuyaqapheleka ukuthi okwamanje baye kuqala "uthando uthayi" futhi zisabalulekile abangazange yanquma. Babengabangane iminyaka eyisikhombisa.
Abanye abagxeki bebuza ukuthi kungani Temnikova ushiye iqembu "Isiliva", impendulo iwukuthi ekuqaleni wafuna ukusebenzisa ubuhlobo nomfowenu umkhiqizi sika okuthuthuka umsebenzi siqu. Umculi yena uyakuphika kule nguqulo. Its kungakhungathekisa kakhulu ukucabanga ngaleyo ndlela.
Ukuze ukuphelela, kufanele uphendule hhayi kuphela umbuzo kungani Temnikova ushiye iqembu "Isiliva", kodwa futhi ukuqonda ukuthi yini wayezothola sizokwenzenjani. Soloist isikhathi eside nginethemba lokuthi indaba ukuxoshwa - ke nje flash kwentukuthelo Maksim fadeev zizoshintsha isinqumo sabo. Kodwa umkhuba kuvela ukuthi ayikho indlela emuva. Vocalist uyavuma ukuthi ubengazi "inkanyezi ifektri" ngubani bayacasuka lapho bezwa ukuthi kukhona lesihlanu nje, okuyinto wanyathela on the yokwakha izimoto eziningi. Ngokusho Heroine ethu, umkhuba ke Yilokho kanye okwenzeka. Uyavuma ukuthi ngaphandle Maksima Fadeeva bebelokhu ubani. Esikhundleni salo kuyoba ekuqaleni iyiphi kwabazabalazayo. Yena ucabanga ukuthi kungcono zimane nje iphrojekthi Maksima Fadeeva. Yena uyaqonda ukuthi zinyamalale ngaphandle umkhiqizi. Ngakho-ke, akahleli ukwenza umculo bebodwa, futhi uhlose azinikele cwaningo kwengqondo noma umlando. Bobabili isayensi Heroine yethu Liyindawo nesithakazelo. Ufuna ukuthola umsebenzi kwenye indawo. Amanothi ukuthi lizokhumbuleka ku nohambo, ijubane yashesha wokuphila, kwendiza nehhotela. Ngokusho vocalist Maxim fadeev baxhumana Artem kanye phakathi kwabazalwane is spoilt. Nokho, isihloko yokuxoshwa kwakhe umkhiqizi akusho ukuxoxa. Manje uyazi ukuthi kungani Temnikova ushiye iqembu "Isiliva" nokuthi kwakukhona ukuphila kwakhe ngemuva iphrojekthi.
Umqambi Silvestrov Valentin vasilevich: Biography, nobuciko kanye ezithakazelisayo amaqiniso
Kozlov Aleksandr Konstantinovich: Biography nemisebenzi
Awuzange ukhohlwe indlela yokuxazulula ezothando quadratic akuphelele?
Yeka indlela okuyingozi kuyinto khona Imigudu caseous emphinjeni?
Highlights ku izinwele ezidayiwe: amahle, yokuqala, imfashini